Tanteraka soa amantsara ny Noely 2014
Sekoly Alahady 26-06-2016
Fizaràna mari-pakasitrahana 26-06-2016
Accueil Ireo Sampana Sekoly Alahady Tanteraka soa amantsara ny Noely 2014
Écrit par Mpandrindra ny SA
Publication : 15 décembre 2004
Misy inona ao amin’ny FPMA Melun fa somebiseby ny iray fiangonana ary ny mahagaga dia zaza no betsaka
Tsy mahatalanjona izany hoy ireto mpianatra sekoly alahady fa androany 14 desambra 2014 no ankalazainay ny fahaterahan’Imanoela ary efa vonona tanteraka izahay hampiseho izay hetsika rehetra nianaranay nandritra ny herinandro maromaro.
Vita soa aman-tsara ny fankalazan’ny sampana sekoly alahady ny "Noely 2014". Nahafinaritra sy nahatalanjona tokoa ny nijery ireto menaky ny aina nihira, nandihy, nitsiky, nihoraka, natahotra, namosaka izay tao anatin’ny fony sy izay nianarany.
Variana ireto ray amandreny, havana aman-tsakaiza, tapaka sy namana tonga maro nijery ireto ankizy ary nametra-panontaniana tany ampony tsy niloaka : taiza no nahaizan’ny ireto zaza ireto izany tsianjery lava be izany ? Ny ray amandreny mitebiteby sy mibitabitaka eo antoerana miteny irery manao hoe : Ho tafavoaka ve ilay tsianjery amin’ny teny gasy ?
Misaotra ny Tompo fa tanteraka soa amantsara ny "Noely 2014" hafakely.
Nanao ny ainy tsy ho zavatra ireto mpampianatra nampita ny fahaizan’izy ireo amin’ireto ankizy. Nanambitamby, nitsiky, nitrerona, nifaly,nisento, izany no nahazo azy ireto. Tsy navelan’ny Tompo ho irery izy ireo satria dia narotsany tamin’ny mpampianatra sy tamin’ny ankizy ny fanahy masina ka nivoaka tao anatin’ny filaminana sy ny fitiavana ny fahasoavana narotsany
Misaotra eram-po erantsaina ireo rehetra izay tonga nanatrika izany hetsika izany, misaotra ny rehetra izay afaka nanampy tamin’ny fanatontosana iny hetsika iny. Singanina manokana ilay filohan’ny sampana SA taona 2011-2013 izay araraotinay eto ny fiarahabana azy nomen’Andriamanitra Dimby sy fara. Arahabaina nomen’Andriamanitra an’i Fara zoky Jenny o !
Misaotra an’i pasitera Roger RAFANOMEZANTSOA izay nitarika ny fotoana.
Misaotra manokana ireo zokinay ao amin’ny STK izahay nanafana ny fotoana ary na nantsoina tampoka aza izy ireo rehefa tojo olana teknika izahay dia tsy nandà fa nanaiky antsitrapo.
Misaotra ihany koa ireo izay tsy afaka nohon’ny antony maro samihafa. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie homba anareo tsirairay ary mirary fety sambatra ho anareo.
Ho hitantsika tsy ho ela ny raki-tsary momba iny fety iny.